नेपालले कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) महामारीका कारण मानवीय क्षति बेहोर्नु नपरे पनि ठूलो आर्थिक क्षति बेहोरिरहेको छ । अहिलेसम्म संक्रमण फैलिन नपाएको र लकडाउनका कारण थप क्षतिको सम्भावना न्यूनीकरण भएकाले सन्तोष मान्ने अवस्था रहे पनि अर्थतन्त्रमा भने यसले निकै ठूलो असर पारिरहेकाले चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसै पनि केही वर्षयता ७ प्रतिशत हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि हासिल गरिरहेको मुलुकका लागि कोरोनाले वाह्य सहायतादेखि वैदेशिक व्यापारमा मात्र नभइ आन्तरिक उत्पादन, रेमिट्यान्सलगायतमा असर पारिरहेको देखिन्छ । दुर्भाग्य यो छ कि अहिलेसम्म नेपालमा कोरोनाले कुन क्षेत्रमा कति असर गरिरहेको छ भन्ने न कुनै अध्ययन हुन सकेको छ न असर परेको क्षेत्रमा राहत र पुनस्र्थापनाका प्याकेज नै आउन सकेका छन् । सरकारले दैनिक प्रशासनभन्दा परसम्म केही सोच्नसम्म सकेको देखिँदैन भने निजी क्षेत्र पनि अध्ययनबिना प्रचारबाजीमा रमाइरहेको देखिन्छ ।
मुलुकमा एकातर्फ कोरोनाको परीक्षण प्रभावकारी र द्रुत गतिमा हुन नसकेको अवस्था छ भने अर्कोतर्फ यही बहाना केहिलाई कमाउने अवसर पनि बनिरहेको छ । पछिल्लो समय स्वास्थ्य मन्त्रालयले चीनबाट सामान मगाउँदा बजार मूल्यभन्दा महँगोमा खरिद गरिएकोदेखि गुणस्तरहीन सामग्री भित्र्याइएकोसम्मका खबरहरू चर्चामा छन् । कोरोनाको आशंकामा अस्पतालमा भर्ना गरिएका केही बिरामीको मृत्यु भइसक्दा पनि समयमै परीक्षण हुन नसकेको बेला सरकार भने खरिदको झमेलामा मुछिनु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।
भारतमा मजदुरीका लागि जाने मजबुर नेपाली र चीनमा छात्रवृत्तिमा जाने नेपालीलाई हेर्ने कानुन फरक छ ? सीमानामा रोकिएका नेपालीको मात्र नभइ आम नेपालीको साझा प्रश्न यही हो ।
कोरोनाभाइरस संक्रमणका कारण यतिबेला सम्पूर्ण विश्व नै आर्थिक मन्दीउन्मुख अवस्थामा छ । एकातर्फ यो संक्रमण नियन्त्रण आफैंमा चुनौतीपूर्ण छ भने अर्कोतर्फ अर्थतन्त्रलाई एक महिनाअघिको अवस्थामा ल्याउनसमेत निकै ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने अवस्था छ । मूलतः भाइरस नियन्त्रणको त्रासदीपूर्ण अवस्थाका कारण संसारभर कडा बन्देज सिर्जना भएको जसका कारण अर्थतन्त्र ठप्पजस्तै बनेको छ । हरेक देशका सरकारले एकपछि अर्को आर्थिक प्याकेजका घोषणा गरिरहेका छन् । विश्वकै ठूलो अर्थतन्त्र भएको अमेरिकाले मात्रै २० खर्ब डलर बराबरको प्याकेज ल्याएको छ भने भारत, तथा युरोपेली मुलुकहरूले पनि प्याकेज घोषणा गरिसकेका छन् ।
सरकारले तीन वा छ महिनालाई पुग्ने खाद्यान्न मौज्दात छ भने पनि यो संकट केही दिनमात्र लम्बियो भने ति गोदाम तीन दिनमै खाली हुन बेर छैन । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) नियन्त्रणका लागि सरकारले लागू गरेको लकडाउनका कारण आम जनजीवनसँगै सबै क्षेत्र प्रभावित छन् । लकडाउनको पालना गर्नु र कोरोना संक्रमण प्रसारको जोखिम न्यूनीकरणको दायित्व पूरा गर्नु सबैको कर्तव्य हो । यससँगै आम सर्वसाधारण उपभोक्तालाई दैनिक उपभोग्य वस्तु सहज र सुरक्षित रूपमा उपलब्ध गराउनु पनि उत्तिकै जरुरी छ । यसका लागि सरकारले केही नीतिगत निर्णय लागू गरेको अवस्था छ भने कतिपय ठूला डिपार्टमेन्टल स्टोरहरूले होम डेलिभरीको समेत व्यवस्था गरिसकेका छन् । यसैले यतिबेला सप्लाइ चेन विस्तारै सहज बन्दैछन्, जसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ ।
लकडाउन व्यवस्थापनमा चुकेका स्थानीय तह
कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नपाओस् भनेर सरकारले लागू गरेको लकडाउनको पाँच दिन बितिसक्दा पनि आम सर्वसाधारण यसमा अभ्यस्त हुन सकेका छैनन् । छिमेकी भारतमा २१ दिनको लकडाउनमा सडकमा निस्केका सर्वसाधारणमाथि प्रहरीले निर्मम प्रहार गरेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा देखिन्छन् भने नेपालकै पनि तराई क्षेत्रमा कतिपय सर्वसाधारणमाथि प्रहरीले लाठी प्रहार गरेको भिडियो सार्वजनिक भइसकेको छ । तर, काठमाडौं उपत्यकामा भने सडकमा सवारीसाधन र सर्वसाधारणको आवतजावत अपेक्षाकृत बढी नै देखिएको छ । कतिपय बाध्यताले यात्रामा छन् त कतिपय रमिता हेर्न वा घर बस्न नसकेर छटपटीले पनि निस्किएका दृष्टान्त छन् । यसरी हामीले लकडाउन पालना नगरेर संक्रमणको जोखिम बढाइरहेका छौं ।
महँगो महशुल र न्यून खपत
मुलुकमा एकातर्फ सामान्य अवस्थामा पनि ऊर्जाको खपत अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन भने अर्कोतर्फ अहिलेको लकडाउनको अवस्थामा भने विद्युत् मागमा २ सय मेगावाटसम्म घटेको छ । कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउनका कारण मुलुकमा विद्युत् खपत घटेका कारण विद्युतीय चुलो प्रयोगका लागि विद्युत् प्राधिकरणले आग्रह गरिरहेको छ भने अर्कोतर्फ सरकारले पनि यस्तो चुलो आयातमा भन्सार महशुल छुटको प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ ।
कोरोना परीक्षण बढाऊ
विश्वमा कोरोना भाइरस भयावह रूपमा देखा परेको दुई महिनापछि मात्र संक्रमण नियन्त्रणका लागि केही तयारी सुरु गरेको नेपालमा हालसम्म तीनजनामा यस्तो संक्रमण देखिइसकेको छ । बुधबार तेस्रो व्यक्तिमा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएसँगै नेपालमाथि नियन्त्रणको चुनौती थपिएको छ । विश्वभर झन्डै १९ हजारको ज्यान गइसकेको कोरोना नियन्त्रण नेपालजस्ता कमजोर तयारी र पूर्वाधारमा समेत सीमितता भएका मुलुकका लागि निश्चय पनि कठिन छ । हुन त सरकारले ढिलै भए पनि लकडाउनको नीति लिएर यसलाई फैलिन नदिन कदम चालेको छ तर यतिले मात्र पुग्ने अवस्था भने छैन ।
अब त सचेत बनौं
अन्ततः स्वास्थ्यमन्त्री र अन्य सरकारी अधिकारीहरूले दावी गरेजस्तै नेपाल कोरोनामुक्त देश रहेन । यसअघि कोरोना संक्रमित व्यक्ति भेटिए पनि उपचारपछि घर फर्केकाले उनको पहिचान गोप्य नै राखेर सरकारले मुलुकलाई कोरोनामुक्त मुलुकको दावी गर्दै आएको थियो । यतिसम्म कि चीनमा भयावह स्थिति हुँदै गर्दा नेपालका एक मन्त्री भने नेपाल कोरोनामुक्त देश भन्दै विश्व पर्यटन बजारमा ब्रान्डिङ गर्ने र भ्रमण वर्ष सफल बनाउने तर्क गर्दै आएका थिए । तर, सोमबार सरकारले नै संक्रमित नयाँ व्यक्ति फेला पारेको जानकारी दियो ।
राहत प्याकेज घोषणा गर
कोरोना भाइरसका कारण मुलुकको अर्थतन्त्रमा मात्र नभई जनजीविकामै संकट उत्पन्न भइसकेको छ । खासगरी मध्यम तथा निम्नवर्गीय नागरिक यसबाट प्रत्यक्ष पीडित छन् । हजारौंले रोजगारी गुमाइसकेको अवस्था छ भने भोलिका दिनमा उद्योगधन्दा, कलकारखाना तथा व्यापार–व्यवसाय नै बन्द हुँदा लाखौं नागरिक रोजगारीविहीन हुनेछन् । असंगठित क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरको अवस्था झनै दयनीय बन्दै गइरहेको अवस्था छ । यसैले सरकारले तत्काल राहतको घोषणा गर्नु आवश्यक छ । तर, यस्तो राहत प्याकेज कसका लागि भन्ने प्रश्न पनि सँगसँगै उठेको छ र मूलतः राहत प्याकेज माग्न निजी क्षेत्र सबैभन्दा आगाडि देखिएको छ ।
सरकारलाई साथ दिऊँ
विश्वभर कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को महामारी बढिरहेका बेला नेपालमा हालसम्म कोरोना संक्रमित कोही पनि नभेटिनु सुखद् पक्ष भए पनि विश्व स्वास्थ्य संगठनले मुलुकलाई कोराना जोखिमयुक्त क्षेत्रको सूचिमा राखिसकेको अवस्था छ । यसैले कोरोनाको सम्भावित संक्रमणबाट नेपाल सुरक्षित छैन र त्यसका लागि सचेतनामूलक कार्य जरुरी छ । कोरोना संक्रमण फैलिएको महिनौंसम्म ‘पर्ख र हेर’को मात्र अवस्थामा मात्र रहेको नेपालले बल्ल नियन्त्रणका केही प्रभावकारी उपायहरू अवलम्बन गरेको छ ।
कृषि विकासको अवसर
कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालको मौनता तोडिएसँगै यस क्षेत्र विकासको महŒवाकांक्षी कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका छन् । उत्पादनको बजार सुनिश्चितता तथा किसानका लागि निश्चित बचत वा नाफाको ग्यारेन्टी सरकारले गर्ने प्रतिबद्धतासहितको कार्ययोजना अर्थात् ‘संरक्षित कृषि, सुनिश्चित बचत’ नारामा सुन्दा जति आकर्षक देखिन्छ, कार्यान्वयनले उनको राजनीतिक भविष्यसमेत निर्धारण गर्नेछ । नेपाली समाजमा माक्र्सवादी सिद्धान्तको व्याख्याताका रूपमा ख्याती कमाएका भुसालले कृषिका यी कार्ययोजना कार्यान्वयनमा पनि उस्तै तदारुकता देखाए त्यो मुलुकको दिगो आर्थिक विकास र रोजगारी सिर्जनाका लागि पनि ठूलो अवसर हुनेछ ।
गभर्नर नेपालका सफलता
केन्द्रीय बैंकको १६ औं गभर्नरका रूपमा आफ्नो कार्यकाल सफलतापूर्वक बिताएका अर्थशास्त्री डा. चिरञ्जीवी नेपालको पृष्ठभूमि भने बैंकिङ थिएन । खासगरी श्रमसम्बन्धी विषयमा विज्ञता राख्ने तर धितोपत्र बोर्डजस्ता नियमनकारी निकायको नेतृत्व गरिसकेका र अर्थ मन्त्रालयदेखि प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको पनि आर्थिक सल्लाहकार रहिसकेका गभर्नर नेपाल कम आँक्न सक्ने व्यक्ति पनि थिएनन् । अर्कातर्फ राष्ट्र बैंकबाहिरको व्यक्ति गभर्नर हुँदा प्रक्रियामुखी कर्मचारीतन्त्रको मानसिकताबाट बाहिर आउन सक्ने र गुट–उपगुटमा रुचि नराख्ने भएकाले पनि नेपालको नियुक्तिले तत्कालीन समयमा राम्रो छाप छाडेको थियो ।
राष्ट्र बैंकलाई नेतृत्व देऊ
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बिरामी हुँदा मुलुकको शासन व्यवस्था बिरामी हुनु हुँदैन । तर, सरकारको मुख्य आर्थिक सल्लाहकार निकाय तथा देशको मौद्रिक नीति निर्माता स्वायत्त र कार्यकारी संस्था नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पनि जबर्जस्ती बिरामी बनाइएको छ । केन्द्रीय बैंक सरकारको अकर्मण्यताकै कारण नेतृत्वविहीन बनेको छ र यस्ता निकायलाई समयमै नयाँ नेतृत्व दिन नसक्नु सरकारको अकर्मण्यतामात्र नभई असक्षमतासमेत हो । त्यसमा पनि पूर्वगभर्नर नै अर्थमन्त्री भएको देशमा राष्ट्र बैंक गभर्नरविहीन बन्नु अनैतिकताको ज्वलन्त नमुना हो ।